सुस्मिताले निधन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, घटनामा अरु पनि संलग्न ! (भिडियो हेर्नुस्) – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/सुस्मिताले निधन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, घटनामा अरु पनि संलग्न ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । छोरीको निधन भएपछि विक्षिप्त बनेकी सुस्मिताकी आमा पहिलो पटक हेटौडा पुगेकी छन् । हेटौडा पुगेर प्रहरी प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई भेटेर आए पछि उनको अवस्था थप वि’क्षि’प्त भएको छ । उनी वेहोस भएर ढलेपछि आफन्तले उनलाई उठाइरहेको देखिन्छ ।
अन्तत सुस्माकी आमानै रहेछिन् मुख्य हत्यारा। भटियो यति ठुलो प्रमाण। खुल्यो पुरै रहस्य